Georginio Wijnaldum oo fariin culus u diray kooxdiisa Liverpool – Gool FM
Horudhac: Liverpool vs Burnley… (Reds oo raadinaysa inay wadada guusha dib ugu soo laabato kulanka caawa ka dhacaya Anfield)
Man United oo dib ugu soo laabatay hoggaanka horyaalka Premier League kaddib guul ay ka soo gaareen Fulham
Juventus oo ku guuleysatay Super Cup-ka Taliyaaniga kaddib markii ay garaacday Napoli xilli Ronaldo uu rikoor cusub sameeyay
Man City oo hoggaanka u qabatay horyaalka Premier League kaddib markii ay guul ka gaartay kooxda Aston Villa… +SAWIRRO
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Fulham iyo Manchester United ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey
Georginio Wijnaldum oo fariin culus u diray kooxdiisa Liverpool
Dajiye November 17, 2018
(Liverpool) 17 Nof 2018. Ciyaaryahanka khadka dhexe Liverpool Georginio Wijnaldum ayaa xaqiijiyay in rikoorada cajiibka ah ay sameeneyso Reds ay tahay arin lagu farxo, balse aysan habooneyn in kooxda ay kahor istaagaan ku guuleysiga koobab dhamaadka xili ciyaareedkan.
Liverpool ayaa heysata rikoor fiican ee dhanka daafaca ah, iyadoo sidoo kale Reds aysan guuldareysan ilaa iyo haatan kadib 12 kulan ee laga soo ciyaaray horyaalka Premier League.
Georginio Wijnaldum ayaa wareysi uu dhawaan ku bixiyay shabakada rasmiga ee kooxxda Liverpool wuxuu kaga hadlay dhowr arimood ee ku saabsan Liverpool wuxuuna yir:
“Daabcan waxaan sameeneynaa rikooro cajiib ah, laakiin uma ciyaareyno kubada cagta sababtan oo kaliya, waxaan dooneynaa inaan badino kulamo si aan ugu guuleysano koobab xilli ciyaareedka”.
“Waa wax wanaagsan in shabaqeena aan ka ilaashano goolal, waxay arintaas kuu sahli kartaa inaad guuleysato kulamada, laakiin kooxda xili kasta waxaa ka maqan nasiib yar”.
“Waxaan sidaas ku soo aragnay kulankii aan la ciyaarnay Manchester City, kadib markii uu garsoorka ku abaal mariyay rigoore, balse waxay martay birta korkeeda, dabcan, tirakoobyadan waxay muujinayaan heerka daafaaceed ee kooxda, gaar ahaan kulamada garoonka Anfield”.
Muxuu ka yiri Roberto Mancini in Cristiano Ronaldo uu ka maqan yahay kulanka caawa xulalka Italy iyo Portugal?
Neymar Jr oo ka hadlay kulankii xalay ay wada ciyaareen Luis Suarez isagoo dhinaca kale ku tilmaamay….